अचेल सासुबुहारीको मनमुटाव कम भएको छ –सीता राना, गायिका – Everest Times News
अचेल सासुबुहारीको मनमुटाव कम भएको छ –सीता राना, गायिका
२०७४ जेष्ठ ४, बिहीबार १९:४०
गायिका सीता राना यसपटक तीजका लागि पश्चिममै व्यस्त छिन् । यसपटक उनले तीज कोसेलीका रुपमा ‘सय कडा तीन’ गीत सार्वजनिक गरिन् । तिर्सना म्युजिक प्रालिको प्रस्तुति रहेको गीतमा उनलाई खुमन अधिकारीलेसाथ दिएका छन् । बाबुराम बोहोराको शब्द रहेको गीतको म्युजिक भिडियोमा बल्छी धुब्रे र रश्मि तामाङले अभिनय गरेका छन् । कमेडी गीतको रुपमा चिनिएको उनको गीत तीज नजिकिदैं गर्दा चर्चामा छ ।
गत वर्ष गायिका रानाले ‘सरी ल’ तीज गीत बजारमा ल्याएकी थिइन् । ८ तीज गीत बजारमा ल्याइसकेकी उनले दोहोरी गीत दर्जन जति गाइसकेकी छन् । गुल्मी सिमेचौरकी रानाले दोहोरी संगीत क्षेत्रमा लागेको १० वर्ष पुगिसकेछ । गुल्मीबाट बुटवल झरेपछि आफु दोहोरी गीतमा रम्न थालेको उनले सुनाइन् । दोहोरी गीतमा प्रवेशसँगै तीज गीत बजारमा ल्याउन थालेकी उनले कयौं दोहोरी प्रतियोगितामा पनि भाग लिइसकेकी छन् । प्रतिस्पर्धा र दोहोरी प्रहारबाटै यस क्षेत्रमा चिनिएकी गायिका सीता रानासँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानीः
तीजमा काठमाडौं बाहिर नै व्यस्त हुनुहुन्छ ?
यसपटक पश्चिमतिरै व्यस्त हुने भइयो । कपिलवस्तु, पाल्पा, बुटवलमा भदौ २० गतेसम्म लगातार तीज कन्सर्टमा छु । यसअघि भारतको लुधियना, जलान्धरलगायत नेपाली भएको ठाउँमा तीज विशेष कार्यक्रम भयो । एकदमै रमाईलो भयो । तीज कार्यक्रम सकेपछि काठमाडौं पुगिन्छ होला ।
आफैं तीज मनाउन पाउनुहुन्न, कतिको दुःख लाग्छ ?
म योभन्दा अघि पनि तीजमा भारतका विभिन्न सहरमा पुगेकी छु । तीजमा नेपाली दिदीबहिनीलाई पनि हसाउँन नचाउन पाउँदा निकै खुसी लाग्छ । हाम्रो काम यही बेला हो । यस्तो बेला अरुलाई नचाउँदै तीज मनाउन पाउँदा त झन् पो खुसी लाग्छ । दुःखी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तीजको गीत गाउन थालेको ८ वर्ष भयो । तीजमा अरु दिदीबहिनी, आमाहरुलाई आफ्नो गीतमा नाचेको हेर्न पाउँदा निकै आनन्द आउँछ ।
तीजका गीतहरु ट्र्याकबाहिर भएको भन्ने गुनासो आउँछ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
मैले यसपटक सय कडा तीन भनेर गाएको छु । यो अहिलेको व्यवहारिक गीत हो । तीज नारीहरुको महान चाड हो । पहिले सासुबुहारीबीचको झगडाको कथा, माइतीलाई दुखेसो गरेको कथाहरु गीतमा आउँथ्यो । अहिले सासुबुहारीको मनमुटाव कम भएको छ । माइतीसँगको दुरी पनि प्रविधिले नजिक तुल्याएको छ । त्यसैले समयअनुसार केही गीत बदल्नुपर्छ । अहिलेका गीतहरु त्यस्तै हुन् । ट्र्याकबाहिर केही गीत गएका होलान् । तर, सबैको अवस्था यस्तो छैन ।
तीज कसरी मनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
आफ्नो तरिकाले, आफ्नो क्षमताअनुसार मनाउनुपर्छ । सरल तरिकाले मनाउनुपर्छ । दर खाने, नाचगान, रमाईलो गर्ने, साथीभाई, दिदीबहिनी भेट्ने अवसर भएकोले आनन्दपूर्वक मनाउनुपर्छ ।
तपाईं तीज गीतमात्र गाउनुहुन्छ कि अरु गीत पनि ?
म खासमा दोहोरी गायिका हो । रोइला गीत पनि गाउँछु । यसपटक तीज सकिनसाथ अब नयाँ दोहोरी एल्बम ल्याउने तयारीमा पनि छ । तीजको गीतको आफ्नै बजार छ । त्यसैले हरेक वर्ष तीज गीत ल्याउँछु । तीज भएकोले अहिले चाहि तीज गीत चर्चामा आएको हो ।
गुल्मीको सिमेचौरबाट कम्प्युटर सिक्न झरेकी थिएँ । दोहोरी गीत गाएको देखें, सुनें । त्यसपछि यही क्षेत्रमा रुचि जाग्यो । दोहोरी प्रतियोगिताहरुमा भाग लिएँ । प्रतियोगितामा कहिले जितिन्थ्यो, कहिले हारिन्थ्यो । यहीबाट सिक्दै सिक्दै यही क्षेत्रमा आइपुगें ।